News & Events | Nepalgunj Sub Metropolitan City
एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राणाको सहयोग !!
Submitted on: Sun, 12/02/2018 - 11:53
नेपालगञ्ज मंसीर १४ गते – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा धवल शमशेर राणाले एक महिनाको तलवभत्ता एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नुभएको छ । खजुरा गाउँपालिका– ४ डी गाउँ निवासी प्रतिमा शर्मालाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि शुक्रबार डा.
Read more about एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राणाको सहयोग !!
जीवन स्तर सुधार क्रियाकलापको अनुगमन !!
Submitted on: Sun, 12/02/2018 - 11:52
नेपालगञ्ज मंसीर १४ गते – सामाजिक विकास मञ्चको यूवा सशक्तिकरण बुल्गारी परियोजनाको जीवन स्तर सुधार क्रियाकलापको संयक्त अनुगमन गरिएको छ ।
Read more about जीवन स्तर सुधार क्रियाकलापको अनुगमन !!
सडक विस्तारका लागि घरबारी टोलमा र्याली !!
Submitted on: Sun, 12/02/2018 - 11:50
नेपालगञ्ज मंसीर १३ गते – नेपालगञ्जमा वजार सडक साँघरीएपछि विस्तारका लागि आवाज उठेको छ । नेपालगञ्जको पुरानो र मुख्य बजार घरवारी टोल साँघुरो भएपछि विस्तारको आह्वानसहित आज सडक विस्तार अभियान थालीएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा न २ वडा समितिको कार्यालयको अगुवाईमा सामुदायिक प्रहरी, बाल, यूवा क्लव
Read more about सडक विस्तारका लागि घरबारी टोलमा र्याली !!
बाल क्लवको वार्षिकोत्सवमा पुरस्कृत !!
Submitted on: Sun, 11/25/2018 - 11:31
नेपालगञ्ज, मंसीर ८ गते –वडा स्तरीय बाल क्लव सञ्जाल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१० ले आफनो दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा विवीध कार्यक्रम गरेको छ । अन्तराृष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसर पारेर सञ्चालित चित्र तथा लेखन प्रतियोगीताका विजेतालाई वार्षिकोत्सव समारोहमा पुरस्कृत गरिएको छ । लेखनकलामा प्रथम दिपी
Read more about बाल क्लवको वार्षिकोत्सवमा पुरस्कृत !!
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको व्यापक तयारी !!
Submitted on: Fri, 11/23/2018 - 11:10
नेपालगञ्ज मंसीर ६ गते– लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाइने भएको छ । लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार, हामलाई छैन स्वीकार भन्ने मूल नारासहित मंसीर ९ गते देखि २४ गते सम्म नेपालगञ्जमा विविध कार्यक्रम गरिने भएको हो । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको अगुवाईमा विभिन्न संघ सस्थासँगको
Read more about लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको व्यापक तयारी !!
रानी तलाउमा जल विहार शुरु !!
Submitted on: Mon, 11/12/2018 - 08:58
नेपालगञ्ज – पुनःनिर्माणपछि नेपालगञ्जको रानीतलाउमा जल विहार सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ८ स्थित रानी तलाउ डेढदशकपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले पुननिर्मित रानीतलाउको उद्घाटन गर्नु भएपछि दोश्रो पटक जलविहारको शुरुवात भएको हो । नेपालग
Read more about रानी तलाउमा जल विहार शुरु !!
जेष्ठ नागरिक उत्थानमा राणाको तलव भत्ता !!
Submitted on: Fri, 11/02/2018 - 16:07
नेपालगञ्ज, कार्तिक १५ गते – तलब भत्ता सामाजिक कार्यमा लगाउदै आउनु भएका नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख डा.
Read more about जेष्ठ नागरिक उत्थानमा राणाको तलव भत्ता !!
मिठाई पसलमा अनुगमन, ४० लीटर दुध नष्ट !!
Submitted on: Mon, 10/15/2018 - 13:46
नेपालगञ्ज असोज २८ गते– चाडपर्वमा अत्यधिक उपभोग हुने मिठाईको अवस्था बारे आज नेपालगञ्जमा अनुगमन गरिएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा गरिएको मिठाई पसलको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताको स्वाथ्यप्रति अझैं पनि सचेत नभएको पाइएको छ । त्रिभुवन चौकका चार वटा मिठाई तथा केक पसलमा गरिएको अनुगमनको क्रममा
Read more about मिठाई पसलमा अनुगमन, ४० लीटर दुध नष्ट !!
सोलार पोल, बस बिसौनी र ट्राफिक पोष्ट निर्माण कार्यको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन !!
Submitted on: Mon, 10/15/2018 - 11:05
Read more about सोलार पोल, बस बिसौनी र ट्राफिक पोष्ट निर्माण कार्यको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन !!
बिद्धुतीय बिज्ञापन बोर्ड जडान एवं संचालनका लागी(२०७५/६/१)मा प्रकाशित सूचनामा थप प्रषटाईएको बारे सूचना !!
Submitted on: Mon, 10/15/2018 - 11:01
Read more about बिद्धुतीय बिज्ञापन बोर्ड जडान एवं संचालनका लागी(२०७५/६/१)मा प्रकाशित सूचनामा थप प्रषटाईएको बारे सूचना !!